Ornagai Offline Version — MYSTERY ZILLION
Ornagai Offline Version
September 2009 edited August 2010 in Project
Jquery နဲ့ JSON ပေါင်းပြီး offline version ပြန်ရေးထားတာပါ။ en to mm ပဲရသေးတယ်
ကျေးဇူးပဲ ကိုစေတန်ရေ.. ယူသွားပြီ.. အိုနာဂိ. အဲ ယောင်လို့ ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်းမသိတဲ့ ornagai offline version ကိုဒေါင်းသွားပြီနော်..
ငှဲငှဲငှဲ........ အဲ့ဒါကို နာ ပထမဆုံးရတာတွ......... စောစောစီးစီး (နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်) သွားတောင်းထားတာ...... မင်မင်ဂျီးတောင် အိပ်ရာ မထသေးဘူး...... ဟီးဟီး..........
jquery json dictionary လို့ရှာရင် ဟောဒီလိုတွေ့ရတယ်..
Ornagai Dictionary with Jquery + JSON - My idea My Life
14 Sep 2009 ... I love jquery and JSON. I finished that project just in2hours. You can download JqueryDict in there. I am thinking about Myanmar to the ...
en.saturngod.net/ornagai-dictionary-with-jquery-json - Cached - Similar
ဒါနဲ့ www.ornagai.com တော့တွေ့တယ် ဆိုက်ကိုမလုပ်ရသေးတာလား စေတန်???
ဒီလင့်မှာလဲ ဒေါင်းလို့ရတာတွေတွေ့တယ် .. .
ornagai.com က CPU usage မြင့်လို့ ဒေါင်းနေတယ် www.ornagai.com/site/ မှာ တင်ထားပါတယ်။
အဲဒီလုပ်ထားတဲ့ ornagai project ကို ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်တစ်ခုမှာ ယူသုံးချင်တယ်
သူ frame ကို ပေါ့ dictionary အနေနဲ့ တော့ ယူသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး
တခြားကို့ ဆိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ချက်ချင်းဖော်ပြချင်တဲ့အနေနဲ့သုံးချင်တာ
တခြား ajax search တွေကို မသုံးချင်တာလဲပါပါတယ် အရင် က MODX သုံးတော့ သူ့ Ajax search ကိုု သုံးတယ် တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုလုပ်မယ့်ဟာက အဲဒါနဲ့ကျတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး . တခြား ajax Autosuggest တွေလဲမသုံးချင်ဘူးဗျာ ... ကျွန်တော် စေတန် ornagai ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဗျာ ရမလား
စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲဒါက အများကြီး ချဲ့သုံးလို့ရတယ်
ဥပမာ ဗျာ ကားလေလံစင်တာတစ်ခုအတွက်ဆိုပါစို့ .. အဲဒီလိုအတွက်ဆို ကြည့်တဲ့ User ကို ချက်ချင်း information ပေးနိုင်တယ်.. အဲဒီလိုပေါ့ဗျာ ..
ornagai offline version ကို စကားလုံး အသစ်တွေ ထဲ ့ချင်ပါတယ်..
data အောက် a.json to z.json တွေ မှာ ထပ်ပေါင်းရင် ရနိုင်မလား..:D
dictionary data file ကို ထပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ add လို့ ရသလား
Yes. You can add in a.json , b.json,...,z.json
or အို na နာ gai ဂေ ( ဝေ ဆိုရင် wai ခုဟာ gai ဆိုတော့ ဂေ ပေါ့ )
အိုနာဂိုင်း လို့ထွက်ပါတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ နာမည်ပါ။ :d
Ornagai ရဲ့ latest version ကိုဘယ်တုန်းက Publish လုပ်ထားတာလဲ .. သိချင်လို့ပါ
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ Ornagai က နည်းနည်း up-to-date မဖြစ်မှာစိုးလို့
ဟီး ... မေးသာမေးနေတာ အဓိကက ဒေါင်းရမှာပျင်းတာလေ... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကွက်ကျော်ကော်နက်ရှင်က သိတယ်ဟုတ် .. ကောင်းကိုမကောင်းတာ .. အဟတ် :P
ဘယ်လို add ရ မလဲ အစ်ကိုရေ
.json ကို .txt လို့ပြောင်းပီး add လုပ်လို့ရတယ်ဗျ
ပေါင်းပီးလို့ ဆိုက်ပေါ်တင်ရင် .json လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်
ခု ornagai.com မှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးကော မရနိုင်ဘူးလားဗျ
data တွေအားလုံးက json format နဲ့ သိမ်းထားတာပါ။ ထုတ်ထားတာကတော့ တော်တော်လေးကို ကြာနေပါပြီ။
ခု ornagai ဆိုက်မှာတင်ထားတဲ့ page ကိုပြောတာဗျ
အဓိကက open data လုပ်ပုံလုပ်နည်း ကုဒ်လေးကြည့်ချင်တာ
အဲဒီမှာ format အစုံရှိပါတယ်။ Developer တွေအတွက်ကတော့ tsv က အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။